एपीएफ टोलीद्वारा गाँजा बरामदचितवन, चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका १ पिप्लेस्थित परेवाकोटबाट बैशाख ७ गते एपीएफ टोलीले करीव १ सय ३० के.जी. गाँजा बरामद गरेको छ । ना ४ च ९२२७ नम्बरको बलेरो गाडीमा राखेर नारायणगढतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त गाँजा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३ मुख्यालय बाहिनी गढीमाईबाट खटिएको एपीएफ टोलीले बरामद गरेको हो । त्यसवेला गाँजा ल्याउने व्यक्ति एपीएफ टोलीलाई देख्नासाथै उक्त गाँजा तथा गाडी सोही ठाउँमा छाडी भागी फरार भएका थिए ।
चितवन, चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका १ पिप्लेस्थित परेवाकोटबाट बैशाख ७ गते एपीएफ टोलीले करीव १ सय ३० के.जी. गाँजा बरामद गरेको छ । ना ४ च ९२२७ नम्बरको बलेरो गाडीमा राखेर नारायणगढतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त गाँजा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३ मुख्यालय बाहिनी गढीमाईबाट खटिएको एपीएफ टोलीले बरामद गरेको हो । त्यसवेला गाँजा ल्याउने व्यक्ति एपीएफ टोलीलाई देख्नासाथै उक्त गाँजा तथा गाडी सोही ठाउँमा छाडी भागी फरार भएका थिए ।